छ्याङदी हाइड्रोपावरको सेयर कारोबार खुल्यो, हेर्नुस् कतिमा हुदैँछ कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » छ्याङदी हाइड्रोपावरको सेयर कारोबार खुल्यो, हेर्नुस् कतिमा हुदैँछ कारोबार ?
काठमाडौं - नेप्सेमा छ्याङदी हाइड्रोपावरको सेयर कारोबार खुला भएको छ । छ्याङदीले ९८ रुपैयाँदेखि २९४ रुपैयाँसम्मको ओपन रेन्ज पाएको छ । यसआधारमा आज छ्याङदीको कारोबार न्यूनतम ९८ रुपैयाँदेखि अधिकतम २९४ रुपैयाँसम्ममा खुला भएको छ ।
छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले दोस्रो बजार कारोबारका लागि २७ लाख कित्ता साधारण सेयर गत बुधबार नेप्सेमा सूचीकृत गरिएको थियो र गत जेठ १४ देखि १८ गतेसम्म १०० रुपैयाँ दरको ५ लाख ४० हजार कित्ता आइपीओ बिक्री गरेको थियो । यसको बाँडफाँट असार १७ गते भएको हो । यसमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३४ कित्तासम्म सेयर पाएका थिए । आइपीओ बिक्रीपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।